Bad breath ခံတွင်းနံ့ မကောင်းရင် – Mawlamyine Daily
Bad breath ခံတွင်းနံ့ မကောင်းရင်
Mawlamyine Daily	က်န္းမာေရး, ေဆာင္းပါး	 October 3, 2020 October 3, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၀
၁။ အသက် ၂၁၊ မ။ ခံတွင်းအနံ့မကောင်းခြင်း ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်မသောက်ပါ။ ရေသောက်နည်းသည်။ သွားမှန်မှန်တိုက်သည်။ စကားမပြောချိန်ကြာလျှင် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းပိုဆိုးရွားကြောင်း သတိထားမိပါသည်။ ဖြစ်ချိန် သုံးလ။ ဘာကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရပါသလဲနှင့် အနံ့ဆိုးပျောက်စေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုပါသည်။ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်ရှင့်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမအမရဲ ့အမျိုးသားက အသက် ၄၀ ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ သူက တခါတရံ စကားပြောတဲ့အခါ သူ့ခံတွင်းက ပုပ်ပုပ်အက်အက်အနံ့ထွက်ပါတယ်တဲ့ရှင့်။ ကျမ အမကလဲ အမြဲလိုလိုပြောတတ်ပါတယ်။ ကန်တော့ပါ။ ဆေးစစ်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆန်ပါတယ်တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်က အနံ့မရကြောင်း ပြောတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့မိသားစုကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေလိုပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါ ဘာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုဆေးမျိူး သုံးစွဲသင့်ပါသလဲရှင့်။ ကျမလဲ အဲ့လိုပုံစံမျိုး ဘယ်တဦးတယောက်ထံမှ မကြားဖူး မသိဖူးပါရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားစေလိုပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်၏သား ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့မှာ အသက်ရူထုတ်လိုက်သည့်အခါ ထွက်လာသည့် လေတွင် ဆိုးဝါးသည့်အနံတစ်ခု ထွက်ထွက်လာပါသည်။ ငယ်ရွယ်သည့်အရွယ်က အနည်းငယ်သာ ထွက်ပါသည်။ ကြီးလာမှသာ ၎င်းဆိုးဝါးသည့်အနံမှာပိုပိုထွက်လာပါသည်။ သွားနှင့်ခံတွင်းဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကြည့်ကာ ခံတွင်းသန့်စဉ်ဆေးရည်နှင့် အာလုပ်ကျဉ်းခြင်း၊ ညွန်ကြားသောသွားတိုက်ဆေးများဖြင့် သွားတိုက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်စေခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းအနံဆိုးသည်ပျောက်သွားခြင်းမရှိပါ။ ညအိပ်ယာဝင်လျှင် အိပ်ယာထဲတွင်းပင် ဤဆိုးဝါးသည့်အနံသည် စွဲ၍ ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ခံတွင်းအနံမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်မှထွက်သောချွေးနံ့လည်းမဟုတ်ပါ။ အသက်ရူသည့်အခါတွင် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဘာဆက်လုပ်သင့်သည်ကို ဆရာအနေနှင့်ညွန်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၄။ ဆရာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ခံတွင်းနံ့ဆိုးပါတယ်ဆရာ။ သွားဆရာဝန်ပြတဲ့အခါ tartar cleaning လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါလုပ်ပြီးကတည်းက ရံဖန်ရံခါ သွားကျင်တာခံစားရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဖြစ်ကောင်းမှ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် မသိပါခင်ဗျာ။ အစာစားပြီးတိုင်း ပလုတ်ကျင်း၊ သွားတိုက်သော်လည်း ခံတွင်းနံ့ဆိုးမပျောက်ပါ။ စကားပြောရာတွင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပင်မပြောဝံ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပျောက်သလို ခံစားရပါသည်။ ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ အနံ့မဆိုးအောင် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမလဲ သိပါရစေ။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကြောင့် ကူးစက်ရောဂါ ဥပမာ HIV ကူးစက်နိုင်ပါသလား သိပါရစေခင်ဗျာ။ သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေဟာ တခါသုံး မဟုတ်လို့ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအနေနဲ့ မည်သို့မည်ပုံ သန့်ရှင်းသည်ကို သိလို၍ မေးမြန်းခြင်းပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
လူတွေထဲက ၂၅% ဟာအနည်းနဲ့အများခံတွင်းနံ့ မကောင်းကြပါ။ ခံတွင်းနံ့ မကောင်းတာကိုဆေးစာနဲ့ Halitosis ခေါ်တယ်။ သွား-ခံတွင်းရောဂါနဲ့ တခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်စေတယ်။ ၈၅-ဝဝ% ဟာခံတွင်းနဲ့ ဆိုင်တယ်။ အသားငါးစားတာ၊ အရက်သောက်တာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ဆေးငုံတာတွေကြောင့် အနံ့ မကောင်းစေဘူး။ လူဝလို့လည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
အစားအစာတွေကိုပါးစပ်ကနေစားသောက်လိုက်ပြီးရင် ကျေချက်ပြီးနောက် သွေးထဲရောက်မယ်။ နောက်မှာ အဆုပ်ကို ရောက်ရာကနေအသက်ရှူထုတ်တော့ ဆိုင်ရာအနံ့ထွက်စေတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာအစားအစာတွေ ကပ်သတ် ကျန်နေရင် ဗက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွါးစေမယ်။ သူတို့ထဲမှာအနံ့ ဆိုးစေတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ အဆိပ်လို ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ ဆေးမကုရင် သွားဖုံးရောမေးရိုးပါ ရောဂါရစေနိုင်တယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတွေ စားရင် Brushing and flossing ပါးစပ်ဆေး၊ သွားတိုက်တာတောင်မှ ခဏတာအနံ့ ဖုံးပေးတာလောက်သာတတ်နိုင်တယ်။ သွားတုတပ်တာနေရာမကျရင်၊ ရိစ် ခေါ် မှိုရောဂါရရင်၊ သွားပိုးစားရင်လည်း အနံ့မကောင်းတာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ပါးစပ်ခြောက်နေတာဖြစ်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။
တံတွေးဟာပါးစပ်ကိုသန့်ရှင်းပေးတယ်။ အက်စစ်ဓါတ်ကိုဖြေပေးတယ်။ သေသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကိုလဲရှင်းပေးတယ်။ တံတွေးနည်း-ခြောက်နေရင် အဲလိုကောင်းကျိုးတွေ မဖြစ်စေတော့ဘဲပုပ်နံ့ထွက်လာစေတယ်။ ပါးစပ်ခြောက်နေတာက ဆေးဝါးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ တံတွေးထွက်အိတ်တွေ ရောဂါရနေလို့လဲ ဖြစ်စေတယ်။ နူမိုးနီးယား၊ လေပြွန်ရောင်၊ နာတာရှည် ဆိုင်းနပ်စ်ရောဂါ၊ တာရှည်နှာရည်ယိုတာ၊ ဆီးချို၊ အက်စစ်ရည် အထက်ဆန်ရောဂါ၊ အသဲရောဂါနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေကြောင့် အာခေါင်ခြောက် နေနိုင်တယ်။
(၁) လွ်ာလျှာကိုညစ်ထေးနေတဲ့ ကော်ဇောလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ တင်စားပြောကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခံတွင်းနံ့ မကောင်းတာကို လျှာကြောင့်ဖြစ်ရတာ ၈ဝ-၉ဝ% ရှိတယ်။ လျှာမှာနေတဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေကနေ Malodorous compounds နဲ့ Fatty acids တွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ လူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ အဲလိုပိုးတွေက လျှာရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာနေကြလို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ မထိရောက်စေဘူး။ နှာရည်ယိုနေတာ၊ အာခေါင် ခြောက်နေတာတွေကြောင့် ပိုဆိုးစေတယ်။ Anaerobic bacteria အမျိုးအစားပိုးတွေကပိုဆိုးစေတယ်။ ကြာတော့ Putrescent smell of indole, Skatole, Polyamines အနံ့တွေ ဒါမှမဟုတ် Rotten egg ဥပုပ်တဲ့အနံ့မျိုးထွက်မယ်။ Volatile sulfur compounds (VSCs) အနံ့မျိုးဖြစ်တယ်။ Hydrogen sulfide, Methyl mercaptan, Allyl methyl sulfide နဲ့ Dimethyl sulfide တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုကြောင့် ဖြစ်သူတွေက Mints, Mouth sprays, Mouthwash တွေ သုံးနိုင်တယ်။ ဒါတွေကနေ အနံ့ဆိုကို ဖုံးပေးတာသာ ဖြစ်တယ်။ လျှာသန့်ရှင်းရေးက ပိုအရေးကြီးတယ်။
(၂) ပါးစပ်ပါးစပ်ထဲမှာဗက်တီးရီးယားအမျိုးအစားပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်ရှိတယ်။ အဒီထဲကတချို့တွေကအနံ့ဆိုးထွက်စေအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကနေ ပရိုတင်းတွေကိုချေဖျက်ပြီး အမိုင်နိုအက်စစ်တွေ ထွက်လာမယ်။ ဆက်ပြီး Hydrogen sulfide နဲ့ Methyl mercaptanတွေ ဖြစ်တဲ့ အနံ့ဆိုးဓါတ်ငွေ့တွေ ဖြစ်စေမယ်။
(၃) သြားဖံုးသွားဖုံးရောဂါတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကတော့ လက်မခံပါ။
(၄) နှာခေါင်းဒုတိယလိုက်တယ်။ Sinus ဆိုင်းနပ်စ်ရောဂါ ထိပ်ခပ်နာနဲ့ ပြင်ပ-ပစ္စည်း ဝင်နေတာတွေကနေ ဖြစ်စေမယ်။
(၅) အာသီးအာသီးရောဂါကနေ ဆဲလ်တွေပျက်စီး-သေဆုံးတာတွေကြောင့် အနံ့ဆိုးထွက်နိုင်တယ်။ ၃-၅% မှာဖြစ်တယ်။
(၆) အစာမြိုပြွန်အစာမြိုပြွန်မှာ Hiatal Hernia နဲ့ GERD ရောဂါရနေရင်ဖြစ်မယ်။ Zenker’s diverticulum ရောဂါ ကနေလဲ ဖြစ်တယ်။
(၇) အစာအိမ်အစာအိမ်ကြောင့် သိပ်မဖြစ်စေတတ်ပါ။ လေချင်တက်တာတော့ ဖြစ်မယ်။
(၈) တခြားရောဂါတွေFetor hepaticusရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းအောက်ပိုင်းရောဂါတွေ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေ၊ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ Metabolic dysfunction ရောဂါ၊ လျှာကင်ဆာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာနဲ့ အစာမြိုပြွန်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်တယ်။
ဘယ္လိုကုသမလဲခံတွင်းသန့်ရှင်းပါ။ ဖလိုရိုက်ပါတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တနေ့ ၂ ကြိမ် သွားတိုက်ပါ။ အစာစားပြီးရင်လဲသွားတိုက်ပါ။ သွားပွတ်တံကို ၂-၃ လ တခါ အသစ်လဲပါ။ Floss ဒါမှမဟုတ် Interdental cleaner သွားကြားသန့်ရှင်းနည်းတနေ့တခါ လုပ်ပါ။ သွားအတုကိုညအချိန် ဖြုတ်ထားပြီးသန့်ရှင်းပေးပါ။ သွားဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန် တနှစ် နှစ်ခါ စစ်ဆေးကုသပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ Chewing gum ငုံပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် သကြားမပါတာကိုငုံပါ။ Sucking on candy စုပ်ရတဲ့ အစားအစာမျိုးကနေသွားရည် ပိုထွက်စေတယ်။ သကြားမပါရင် ပိုကောင်းတယ်။
ကြော်ညာပြီးရောင်းနေတဲ့ Mouthwashes ပါးစပ်ဆေးဆေးရည်တွေကိုသတိပြုသုံးပါ။ ခဏလောက်သာ အနံ့ဆိုးကို ဖုံးပေးမယ်။ Astring-O-Sol, Colgate, Dentyl pH, Listerine, Oral-B, Sarakan, Scope နဲ့ Tantumverde တွေ ဖြစ်တယ်။ Oral-B ကို ၂၀၀၉ ကတည်းကရောင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီ။ Antiseptic mouth-rinse တွေကပိုးတွေသေစေမယ်။ 3G Mouthwash, All-Fresh, Alna Biotech, Am Pm Mouthwash, Ampm Mouthwash, Angelica Mouthwash, Antiplaque Mouthwash, Antiseptic & Antiplaque Mouthwash, Chlorex Mouthwash, ChlorhexadineGluconate Mouth Wash, Chlorhexidine Mouthwash, C-Nate–ChlorhexidineGluconate, Dysinc Mouthwash, FRESHO Mouthwash, Gumdent Mouthwash, Herbal Mouthwash, Listerine Liquid Mouthwash, Mouthwash (AMPM), Nirmal Mouth Wash, Oral care Flavours and Fragrances, Oraline Mouthwash (Chlorhexidine Mouthwash) နဲ့ Speedent Mouth Wash တွေ ဖြစ်တယ်။
လျှာကိုညင်ညင်သာသာတနေ့ ၂ ခါ သန့်ရှင်းပါ။ လျှာပေါ်က ဗက်တီးရီးယား၊ အစာအကြွင်းအကျံတွေ နဲ့ Mucus အကျိအချွဲတွေကို Tooth brush, Tongue cleaner, Tongue brush/scraper စတဲ့ လျှာဆေးကရိယာသုံးပါ။ ဇွန်းနဲ့လဲလုပ်လို့ ရပါတယ်။ လျှာကိုမခိုက်မိပါစေနဲ့။ လျှာနောက်နားမှာ V-shaped ပုံရှိနေတဲ့ Taste buds အရသာခံအသီး-အဖုလေးတွေကိုမထိခိုက်စေပါနဲ့။ တခုခုစားပြီးတိုင်းပါးစပ် ပလုပ်ကျင်းပါ။ Streptococcus salivarius K12 ဆေး သုံးနိုင်တယ်။ Antibacterial mouthrinses က အကျိုးရှိစေတယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေကိုနိုင်တဲ့ Cetylpyridinium chloride, Chlorhexidine, Zinc gluconate, Essential oils, နဲ့ Chlorine dioxide တွေကိုသုံးတယ်။ တချို့က Odor eliminators အနံ့ကိုနိုင်တဲ့ Oxidizers တွေကိုလဲသုံးတယ်။
အိမ်သုံးဆေးနည်းတွေကွမ်းသီးအစို၊ ကွမ်းရွက်နဲ့ ကွမ်းသီးအခြောက်တွေကိုဝါးခိုင်းတယ်။ တချို့က ဒီလိုလုပ်တာ သိပ်ကြာရင် ကင်ဆာ ဖြစ်စေမလား စိုးရိမ်တယ်။ သံပုရာ-ရှောက်သီး၊ လေးညှင်း၊ ဖါလာစေ့၊ စမုန်စပါး၊ ပန်းသီး၊ သွပ်ဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ရေနွေးကြမ်း၊ ဆိုဒါ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက် တွေကိုသုံးနိုင်တယ်။
သွားခံတွင်းကောင်းနေပေမဲ့ အနံ့မကောင်းသေးရင် တခြားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရမယ်။ နာတာရှည် ပါးစပ်နဲ့ မကောင်းသူတွေကို ကုရတာခက်တယ်။ တာရှည်ဖြစ်နေရင် သွားဖုံးရောဂါကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ သွားအပေါ်ဖုံအလွှာ ဖြစ်လာရင် အဲလိုရောဂါ ဖြစ်စေတယ်။ Mouthwashes သုံးပြီး နာတာရှည် ခံတွင်းနံ့ ဆိုးနေတာကိုကောင်းစေတယ်လို့ သုတေသနက သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ခံတွင်းနံ့ကို သိပ်ကောင်းစေချင်လို့ ဆေးလာကုသူတွေထဲက ကဲသူတွေကို Halitophobia ဆိုတာ Delusion halitosis လို့ ခေါ်တယ်။ အလိုလို ကြာညိုနံ့ သင်းချင်နေသူကိုပြောတာပါ။
Bad mouth ဆိုတာအာဖရိကကလာတဲ့ ကျိန်စာသဘော ဖြစ်ပြီးဒီခေတ်မှာ သူများအပြစ်တင်တာကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ဗမာတွေကတော့ ခံတွင်းနံ့ ကောင်းချင်ရင် မုသားမပြောပါနဲ့တဲ့။
ကျွန်မအသက် ၂၅နှစ်ပါ။ အပျိုပါ။ ရာသီစက်ဝန်းမှန်ပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူးရောဂါတွေလည်းမရှိပါဘူးဆရာ။ ဆရာရေးထားတဲ့ Bad Breath ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဖတ်ရပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့မကောင်းတာနဲ့ ပက်သက်လို့ ဆရာ့ဆီက အကြံဉာဏ်လေးတောင်းချင်လို့ပါ။ ခံတွင်းနံ့ကနံပါတယ်ဆရာ ဘယ်လိုအနံ့မျိုးလဲဆို အစားအစာတွေပုပ်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ အနံ့မျိုးပါ။ ကိုယ်တိုင်တော့သေချာမရပေမဲ့ တစ်ဖက်လူကရနေတာပါ။ အနံ့ကတစ်ခါတစ်လေမဟုတ်ဘဲ အမြဲရနေတာမျိုး မို့လို့ သွားနဲ့ပက်သက်ပြီး ခြောက်လတစ်ခါစစ်ဆေးပါတယ်ဆရာ။ သွားနဲ့ခံတွင်းကအားလုံးအဆင်ပြေပြီး အနံ့က မပျောက်တော့ ဘာကိုစစ်ဆေးရမလဲမသိတော့လို့ပါဆရာ။ ဆေးခန်းသွားပြီးဆွေးနွေးဖူးပေမဲ့ ရေရေရာရာမသိရလို့ပါ။
1. Mouth rinses ပါးစပ်ဆေးပါ။ Listerine ဆေးရည်သုံးပါ။ ဆားရေနွေးလည်း ကောင်းတယ်။2. Treatment of dental disease သွား သွားဖုံရောဂါရှိရင် ကုသပါ။3. Brush your teeth after you eat စားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ပါ။4. Floss at least onceaday သွားကြားကြိုးနဲ့ တနေ့တကြိမ်သန့်ရှင်းပါ။5. Brush your tongue လျှာကိုလည်း သွားတိုက်စဉ် တိုက်ပေးပါ။6. Avoid dry mouth ခံတွင်း ခြောက်မနေပါစေနဲ့။7. Adjust your diet အစားအသောက် ရွေးစားသောက်ပါ။ ချင်းနဲ့ ကြက်သွန်နီ။8. Regularly getanew toothbrush သွားပွတ်တံ မကြာမကြာ အသစ်လဲပါ။ မကြမ်းလွန်း မနုလွန်းစေရ။9. Schedule regular dental checkups သွားဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန် စစ်ဆေးပါ။